ICosta Blanca: isimo sezulu esinelungelo, amagugu amakhulu nokuzijabulisa | Ukuhamba kwe-Absolut
ICosta Blanca inwebeka cishe amakhilomitha angamakhulu amabili ngasogwini lwase I-lift yaseSpain. Lithola leli gama ngamabhishi alo anesihlabathi esicwebile namanzi acwebezelayo, kepha futhi nemizana yalo yezindlu ezicakiwe kanye nezindunduma ezinamadwala. Ungajabulela ngayo cishe izinsuku ezingamakhulu amathathu zokukhanya kwelanga ngonyaka futhi isilinganiso samazinga okushisa aphelele amadigri ayishumi nesikhombisa.
Izindawo ezinhle kakhulu ezibekwe emapaki amahle emvelo, isithelo esiyigugu esikhulu somlando ocebile futhi obanzi, ukunikezwa kwehhotela okubanzi kanye ne-gastronomy okumnandi njengokudla okunempilo ezinye izimfanelo iCosta Blanca ekunika zona. Akukhona ngenhlanhla ukuthi minyaka yonke izigidi zezivakashi zaseSpain nezakwamanye amazwe ziya kuyo ukuze zijabulele amaholide azo. Uma ufuna ukumazi, sikumema ukuba usilandele.
1 Amadolobha aseCosta Blanca
1.8 USanta Pola
1.10 Ezinye izindawo
2 Isimo sezulu eCosta Blanca
3 Imikhosi ejwayelekile yeCosta Blanca
4 I-Gastronomy yeCosta Blanca
5 Ungafika kanjani eCosta Blanca
Amadolobha aseCosta Blanca
Njengoba sishilo, iCosta Blanca ilula cishe amakhilomitha angamakhulu amabili ogwini lwaseLevantine futhi ifaka nomasipala Isifundazwe sase-Alicante afika kuze kufike umngcele ofanayo nalowo kaMurcia. Ake sibone okuthakazelisa kakhulu.
Kuyadingeka ukuthi siqale uhambo lwethu lokungena enhlokodolobha yesifundazwe uqobo. Ngamabhishi afana nePostiguet, iSan Juan, iLa Albufereta noma i-Aguamarga (lena eyenzelwe izinja), i-Alicante ikubonisa nefa elihle kakhulu.
Izimpawu zayo zifaka phakathi isigodlo saseSanta Barbara, isakhiwo sama-Arab esakhiwe kabusha ngamaKrestu phakathi kwekhulu leshumi nane kanye neshumi nesishiyagalombili futhi okungenye yezinqaba ezinkulu kakhulu eYurophu. Kufanele futhi uvakashele i- ICo-Cathedral yaseSan Nicolás de Bari, eyakhiwe ngekhulu leshumi nesikhombisa ngesitayela se-Herrerian Renaissance futhi esine-blister yekhulu leshumi nanhlanu; i isigodlo se-baroque se-Holy Face noma i isonto laseSanta Maria.
Inqaba yaseSanta Barbara
Futhi, okunye kokuheha i-Alicante kungokwakhe izigodlo nezindlu ezinhle. Phakathi kwabokuqala, labo beGravina, Maisonnave nePortalet, bonke kusukela ngekhulu le-XNUMX. Futhi, phakathi kwesibili, iCasa de La Asegurada, yamanje IContemporary Art Museum, noma uMkhandlu Wedolobha. Uma uvakashela lesi sakamuva, esakhiwe ngekhulu le-XNUMX, unelukuluku lokufuna ukwazi: lisendaweni ephakeme kakhulu ngaphezu kogu lolwandle futhi lisebenza njengesithenjwa lapho ulinganisa ukuphakama kunoma iyiphi ingxenye yeSpain.
Kepha ungabona futhi izakhiwo zesimanje e-Alicante. Ngalo mqondo, iMakethe Ephakathi kanye neLonja zigqamile, izakhiwo ezimbili zesimanje kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX; i isigodlo saseSan Fernando, kusukela ngekhulu le-XNUMX, kanye nePrincipal Theatre, isakhiwo se-neoclassical esivela maphakathi naleli khulu leminyaka.
Ekugcineni, endaweni yaseLa Albufereta ungabona izinsalela zedolobha lase-Iberia-Roman of ILucentum, izingcezu zazo eziningi zikwiProvincial Archaeological Museum, lapho ungabona khona i- Intokazi kaCabezo Lucero, esinye sezithombe ezifanele kakhulu zase-Iberia eSpain.
Leli dolobha likwazile ukugcina ubuhle balo bendawo edobayo naphezu kwezokuvakasha, nedolobha elidala elinemigwaqo emincane. I- IMontgó massif Iyayivikela futhi kuyo ungathola ukubukwa okuhle kweCosta Blanca. Ngisho nasezinsukwini ezicacile ungabona imigwaqo ye-Ibiza.
Phakathi kwezikhumbuzo zayo, i- inqaba, eyakhiwe ngezikhathi zamaSulumane futhi esendaweni ephakeme kakhulu emithambekeni yayo kukhona izinsalela zomuzi wasendulo waseRoma I-Diannium. Ungabona izingcezu ezikhishwe kule ndawo yokuvubukula emnyuziyamu wenqaba uqobo lwayo.
IDenia neMassgó massif
Kufanele futhi uvakashele isakhiwo se-neoclassical se-Town Hall; i indlu enezivikelo eziqinile yaseBenitzaina, kusukela ngekhulu le-XNUMX futhi wamemezela iSiza Senzalo Yesiko; i baroque esontweni loKwenyuka; ama-hermitages eSan Juan naseSanta Lucía nemibhoshongo yokuzivikela yasogwini njengaleyo yase-Almadraba neGerro.
Ekugcineni, ungajabulela amabhishi nama-coves anjengeLa Marineta Casiana neLes Marines. Futhi ungakhohlwa ukuhambahamba Indawo yaseBaix la Mar, inezindlu zabadobi abamhlophe nezindawo zokudlela.
Kutholwe ethekwini elihle elenziwe izigqoko ezimbili, eJavea unedolobha elihle elidala elinemigwaqo emincane, izindlu ezincane ezimhlophe nezigodlo zasendulo. Kodwa-ke, itshe lesikhumbuzo salo elibaluleke kakhulu liyamangalisa isonto lenqaba iSan Bartolomé, eyakhiwe phakathi kwekhulu leshumi nane kanye neshumi nesithupha futhi insimbi kabell yayo ibonakala ivela kuso sonke isifunda. Kuyisikhumbuzo Sikazwelonke Sobuciko.
Ngaphezu kwalokho, ungajabulela ibhishi lase-Arenal eJavea, enkabeni yedolobha, futhi ngaphezu kwakho konke thatha enye yemizila yokuhamba izintaba eholela emibonweni ye Ipaki Yemvelo yaseMontgó, esikhulume naye ngaphambili ngaphambili kwemibono kabani.
Uvikelekile ngaphansi kokuhlaba umxhwele Idwala le-Ifach, Olunye lwezimpawu ezinkulu zeCosta Blanca, idolobha laseCalpe livelele ngqo ngepaki lemvelo lamamitha-skwele ayizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu akha lesi sigaxa samatshe. Yindawo ekahle yokukhuphuka nokudilika emanzini. Kepha ikunikeza namabhishi amahle kakhulu njengeLevante, Arenal-Bol neCantal Boig.
Ngokuqondene nezikhumbuzo zalo, ziyabonakala Amageza weNdlovukazi, ezinye izinhlobo zezinhlanzi zangezikhathi zamaRoma; i UCastell del Mascarat, inqabayokulinda yekhulu le-XNUMX okuyiSayithi Lezamasiko, neCasanova, indlu yasemakhaya kusukela ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX.
Njengoba ugu olungamakhilomitha ayisithupha lushintsha amawa namawa, i-Altea yidolobha elihle. Ingxenye yakudala, eyaziwa njenge Iforamu Yakhiwe ngemigwaqo ebiyelwe ngocingo nezindlu ezincane ezinezinhlaka ezimhlophe ezihlotshiswe ngezimbali. Futhi ichweba layo lihle kakhulu.
Ngokuqondene namabhishi, ungakujabulela okweLa Roda, iLa Olla neCap Negre. Ibuye ibe namabhishi amathathu ama-nudist: iMascarat Norte, iLa Solsida neCala de la Barra Grande.
Ekugcineni, ungavakashela ku-Altea the Isonto lezindela lamaKarmeli Akhethiwe; the IGalera Tower, okuyi-Asset of Cultural Interest; okuyigugu Isonto Lobu-Orthodox, ephinda ithempeli laseRussia lekhulu le-XNUMX, noma iCasal del Festero Museum, lapho uzobona khona imvunulo ejwayelekile yemikhosi yamaMoor namaKrestu, esizokhuluma ngayo ngokuhamba kwesikhathi.
Asidingi ukukutshela ngeBenidorm, enye yezindawo ezinhle zokuvakasha eSpain. Ngamabhishi amabili amahle, iLevante nePoniente, ehlukaniswe ngumbono obhabhadiswe njengo Kuvulandi waseMedithera, ivelele i-its impilo yasebusuku, enamadisco amaningi, izinkantini nemigoqo.
Kepha ungathola futhi ezintathu eBenidorm amapaki etihloko: I-Terra Mítica, enesizinda esingokomlando; I-Aqualandia, ukujabulela ama-slides amakhulu, neMundomar, ukubuka izilwane. Kumele futhi ubone isiza samaRoma se- I-Tossal de la Cala; umbhoshongo wePunta del Cavall, otholakala eSierra Helada Natural Park, nase Isonto laseSan Jaime neSanta Ana, eyakhiwe ngekhulu le-XNUMX ngesitayela se-neoclassical.
Ekugcineni, okunye ukukhanga okukhulu kweBenidorm kuyinto isiqhingi, Ebheke ethekwini futhi enomlando omuhle odumile. Umdondoshiya uRoldan wayeyithanda kakhulu intokazi eyagula. Yimisebe yelanga kuphela okwakubonakala ukuthi iyalulama. URoldán washaya isibhakela intaba yasePuig Campana kwathi ingxenye yaso yawela olwandle (kusenomfantu osabonakala egqumeni namuhla), wakha lesi siqhingi, lapho ilanga lishona khona ngemuva kwemizuzu embalwa.
Idolobha elidala laleli dolobha lakha i- Isakhiwo somlando nobuciko seLa Vila, lapho izindonga ezimangalisayo ze-Renaissance kanye ne isonto lama-gothic lokwenyuka. Kufanele futhi ubone i-chalet yaseCentella, isigodlo sasemadolobheni esinesitayela se-eclectic, kanye nemibhoshongo yasogwini neyengadi egade ukufika kwabaphangi baseBarbary ogwini. Phakathi kwalezi, ezika-Aguilo nezikaDalt.
Kepha i-Villajoyosa ivelele ngaphezu kwakho konke ngefa layo elikhulu lamaRoma. I- Amabhati amaRoma ase-Allon, indawo yokugcina izitolo iMalladeta nombhoshongo weSant Josep yizici zawo ezintathu eziyinhloko. Ngokuphathelene namabhishi, unenani elikhulu lawo edolobheni namaphethelo. Ibhishi laseParaíso, Bol Nou ne-Estudiantes livelele.
Kufanele futhi uvakashele kuleli dolobha i- Amanxiwa ePortus Ilicitanus, indawo yase-Iberia kusukela ngekhulu le-XNUMX BC lapho kwakhiwa khona ifektri yaseRoma. Phakathi kwazo zonke lezi zinsalela, i-Casa del Palmeral, indawo enamatshe amakhemikhali asenkathini yesiLatin, ibonakala. Futhi kugqamisa eSanta Pola inqaba-yenqaba, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi enezindlu zokugcina iminyuziyamu ezimbili: iSea Museum kanye neFishing Museum.
Ngokuphathelene nemvelo, unamabhishi amahle kakhulu afana neTamarit, iVaradero neLisa, wonke ahlome ngokuphelele. Futhi futhi okumangalisayo ILas Salinas Ipaki Yemvelo, ebhalwe njengendawo ekhethekile yokuvikela izinyoni.
Futhi lapha uzothola ipaki yemvelo, leyo yeLagunas de la Mata neTorrevieja, okwakungamakhulu eminyaka kungawusawoti futhi okwamanje kuyindawo ebalulekile ekufudukeni kwezinyoni. Phakathi kwamabhishi ayo, lawo eLos Locos, i-El Cura, iLa Mata neDique de Levante avelele. Kepha, ngaphezu kwakho konke, lokho kukaCabo Cervera, hhayi kuphela ngenxa yezimfanelo zayo, kepha ngoba kuyo, ikakhulukazi ku IMoro tower, uzothola umbono obabazekayo onikeza imibono emangalisayo yeCosta Blanca.
Noma kunjalo, ungajabulela amadolobha aseCosta Blanca afana nawo U-Albir, ngamakhava alo amahle; El Campello, namanxiwa ase-Iberia ase-Illeta; U-Guardamar del Segura, nezandiso zayo ezinkulu zezihlahla zikaphayini, futhi I-Pilar de la Horadada, esivele inqamula isifundazwe saseMurcia. Zonke ngaphandle kokukhohlwa Isiqhingi saseTabarca, Amanzi ayo aphethe isigaba seMarine Reserve yaseMedithera, ngenxa yezinhlobonhlobo zezilwane nezitshalo.
Isimo sezulu eCosta Blanca
Enye yezinzuzo ezinkulu zeCosta Blanca yisimo sezulu sayo esihle kakhulu. Uma uhambela kuyo, empeleni ukhipha ilanga nomshuwalense omuhle wesimo sezulu. Empeleni, izinsuku ezikhanya ngalo unyaka cishe zingamakhulu amathathu, okuqinisekisa amahora amaningi olwandle.
Indawo ine- Isimo sezulu esivamile saseMedithera. Ngakho-ke, imnene kakhulu maqondana namazinga okushisa nemvula encane. Ubusika bumnandi kakhulu, ubuncane baba cishe ama-degree amahlanu nama-maximum ayi-XNUMX. Ngokwengxenye, lokhu kungenxa yokuthi amakhaza awavamile.
Amahlobo ayashisa, aphakeme ngaphezu kwama-degree angamashumi amathathu nobusuku obushisayo obungaqabuki behle ngaphansi kwamashumi amabili. Uzobona lokho kuzwa kokushisa okuqiniswe umswakama wendawo. Uma kukhulunywa ngogu, kungadlula amaphesenti angamashumi ayisikhombisa.
Ngakolunye uhlangothi, imvula iyindlala kakhulu, igxila entwasahlobo nasekwindla. Noma kunjalo, lokho okubizwa ngokuthi iconsi elibandayo, okwenzeka futhi ezinyangeni ezisina kakhulu. Kuqukethe ukuwa kwezulu okukhulu kakhulu ngesikhathi esifushane kakhulu, okuvame ukudala izikhukhula.
Ngakho-ke, izinyanga ezinhle kakhulu zokuvakashela iCosta Blanca yilezo kuqala, ngamazinga okushisa amnandi kakhulu. Futhi ngeke kudingeke ukhathazeke ngemvula ngoba, yize kungenye yezinkathi zemvula kakhulu, iseyindlala njengoba kuyisimo sezulu esomile.
Imikhosi ejwayelekile yeCosta Blanca
Njengakuyo yonke iLevante, imikhosi ehlobene nomlilo inesiko elide eCosta Blanca, ikakhulukazi umlilo womlilo kasanta john. Okujwayelekile kakhulu Imikhosi yamaMoor namaKrestu, ebanjwa cishe kuwo wonke amadolobha futhi aqala kabusha impi phakathi komunye nomunye. Ezidume kakhulu yilezo ze-Villajoyosa.
Ngakolunye uhlangothi, yize idolobha lase-Elche lingelona elaseCosta Blanca, igama lalo masipala lifakiwe kulo. Futhi kuwo omunye wemikhosi yasekuqaleni eSpain wenzeka. Imayelana ne- Imfihlakalo ka-Elche.
I-Gastronomy yeCosta Blanca
Njengakuyo yonke iLevante yaseSpain, iCosta Blanca ibonakala ngayo irayisi, ezilungiselelwe ngezindlela ezahlukahlukene kakhulu. Kepha futhi izithelo nemifino zibaluleke kakhulu ekhishini lakho. Lokhu kunjalo ngotamatisi weMuchamiel, i-Alicante Mountain cherry, i-Elche pomegranate noma iSeñora de Guardamar.
Phakathi kokudla okujwayelekile kwale ndawo kubalwa irayisi elinesigaxa noma ibhandishi, nonogwaja neminenke noma nobhontshisi notheniphu; izinhlanzi ezintsha ezigazingiwe, ezigosiwe noma ezitsheni ezinjenge i-bollitori noma i izimvu, kanye ne-shellfish, ngokubaluleke kakhulu kwe-prawn ebomvu. Kepha i amabhola aphekiwe, baphatha inyama enkulu; i ama-gazpachos futhi i sibongile noma iphalishi.
Futhi, njengama-dessert, i- U-Alicante toña, the Jijona nougats, the ama-brandy rolls weVillajoyosa noma i- i-ayisikhilimu futhi i ubisi lwe-meringue. Ngokuqondene neziphuzo, i- Ubisi lwe-tiger nut lunyakazisa, Iwayini le-Vinalopó nama-liiseurs anise njenge i-herbero noma ikhofi efana i-burret.
Ungafika kanjani eCosta Blanca
ICosta Blanca inesikhumulo sezindiza samazwe omhlaba, i- kwe-Altet. Ungafika futhi e-Alicante ngesitimela, ngomugqa we-AVE oxhuma leli dolobha neMadrid. Uma usendaweni, ungahamba ngomgwaqo ngomgwaqo we-A-38, oqala ukusuka Valencia kuPilar de la Horadada.
Kepha ungakuthola kulula kakhulu ukusebenzisa ama-trams nezitimela ze- I-TRAM-Metropolitan yase-Alicante, oxhumanisa leli dolobha namadolobha amakhulu eCosta Blanca. Phakathi kwemigqa yayo kuvela i-9, eyaziwa njenge I-Trenet de la Marina, exhuma iBenidorm neDenia nge-Alfaz del Pi, Calpe, Altea noma eBenisa. Ekugcineni, ungahamba ngebhasi noma ngetekisi.
Ekuphetheni, iCosta Blanca ikunikeza konke okudingayo ukuze ujabulele ukuhlala okungenakulibaleka. Unokuxhumana okuhle ukufinyelela kuyo futhi udlule kukho. Ine- umnikelo wehhotela omangalisayo. Isimo sezulu sikuqinisekisa ngelanga. Inamagugu abanzi futhi amahle kakhulu futhi, njengokungathi konke lokhu bekunganele, i-gastronomy yayo iyinhle. Ngabe usalindeni ukuyivakashela?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » ICosta blanca